Todoba ku dhimatay shil baabuur iyo 8 bilood jir badbaaday balse wayday waalidkeed. – Radio Daljir
Dangorayo, Mar 02 -Todobo qof ayaa ku dhintay siddeed kalena waa ay ku dhaawacmeen shil gaari oo aad u fool-xun kaasoo ka dhacay agagaarka degmada Dangoroyo ee gobolka Nugaal. Shilkan oo ay ka badbaaday gabar jirta siddeed bilood ayaa halkaa kuwayday waalidkeed. Shilka ayaa la rumaysan tahay in uu sababsaday mas?uuliyad-darro la sheegay in uu ku kacay darawalkii gaariga.
Duqa degmada Dangoroyo Mukhtaar Cabdiraxmaan Xaaji ayaa Daljir u sheegay in shilkan uu ka dhacay meel degmada dhinaca waqooti uga beegan shan KM xalay 3-dii dambe ka hor salaadda subax. Waxa uu sheegay in dadka todobada ah ee dhintay uu ku dul fariistay gaarigan oo ahaa nooca xamuulka ah ee loo yaqaan waaraadka. Dadka dhinay ayaa isugu jira saddex dumar ah oo ay laba caruur tahay iyo afar rag ah, waxana uu duqu sheegay in ay waayeen gaari wiish ah oo ay maydka uga dul-qaadaan gaariga qalibmay.
Mudane Mukhtaar waxa uu sheegay in darawallo kale oo goobta soo gaaray saacado kadib ay sheegeen in ay wadaha uga digeen xawaaraha iyo habeeyn socodka labadaba balse waxa la sheegay in uu arinkaas ka madax-adaygay. Sida ay sheegayaan dadka ka badbaaday shilkan, darawalka gaariga ayaa seexday xilliga uu gaariga qalibmayo.
Shilkan ayaa waxa ka badbaaday darawalka iyo gabar siddeed bilood jir ah inkasta oo ay halkaa ku dhinteen labadeedii waalid. Duqa degmada ayaa sheegay in gabadhaasi yar haatan maamulka degmada ay gacanta ku hayaan.
Degmada Dangoroyo ayaa kamida meelaha ay inta badan ku rogmadaan gawaaridu. Inkasta oo ay waddadu aad u hagaagsan tahay, misana waxa halkaa ku badan meermeerka ama qal-qallooca waddada.